यस्तो छ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठ) - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार यस्तो छ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
यस्तो छ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा सरकारका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रणलाई राखेको छ । यसका अतिरिक्त संविधान संशोधन, प्रशासनिक सुधार एवं आर्थिक सामाजिक एजेन्डाहरुका बारेमा पनि पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा व्याख्या गरिएको छ ।
काँग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुईसाता लगाएर तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा शुक्रबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको हो । कार्यदलमा डा. मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र यादव सदस्य थिए ।
Previous articleजसले ८९औं दिनमा जिते कोरोना
Next articleबार्सिलोनाबाट बाहिरिएका मेस्सीको अबको यात्रा कता ? यी हुन् सम्भावित क्लब
एमसिसी पास गर्ने सरकारको तयारी, देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाइयो